သစ်ခက်သံလွင် ကဗျာစင်မြင့်၊ ငြိမ်းအေးလူ၊ ကမ်လူဝေး၊ လင်းသက်ငြိမ်တို့၏ကဗျာများ
on July 27, 2016 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Poems
အပန်းဖြေဖို့ စိုက်နေသူတွေကို ငါမယုံဘူး
သူတို့ကလည်း ငါ့မယုံခွင့်ကို မယုံဘူး. . .
ရှုခင်းတွေက ပိုပြီး စိမ်းပြန့်သိပ်သည်း
ရှုမငြီးဖြစ်မှာ အမှန်ပဲ. . . ၊
တောင်ခြေက ပုဝင်နေတဲ့လူတွေ. . .
ရှုခင်းဖြစ်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး. . . .
ခုန်ထွက်ပြေးနေတဲ့ အရောင်တွေပါပဲလေ. . . .။
၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၆
ကရင်တကျပ် ဗမာတကျပ်လား သူတို့ကနှစ်ကျပ်
မြစ်ထဲက သဲတွေလို မှုန်ဝါး။
​ဖော်​​ဝေး ဒိုင်​ယာရီ ဖတ်​​နေမိတာကလွဲရင်​ ညကညပါပဲ။
ပလပ်​စတစ်​ဆာဂျရီ၊​ အော်​သံ၊ အာဇာနည်​အမှတ်​တရစာစုများ၊ လမ်း၊ မြန်​မာ့လက်​စွဲ၊ အ​အေးလွန်​စာစုများ၊ အနီ​ရောင်​သံခိပ်​၊ ဖြစ်​နိုင်​​​ခြေရှိ​သော​ခေတ်​ပြိုင်​ကဗျာအလားအလာများ၊ ငါ့စုဗူး၊ ကဗျာကြုံပါးလိုက်​တယ်​၊​ တွေး​တောနိုင်​သမျှ​ရေး​ပြောနိုင်​ရမည်​၊
​ခြေရာလက်​ရာ၊​ မောင်​​ချောနွယ်​အတု၊ မာယာကော့ဗ်​စကီး​ပြောတဲ့ပန်းပုဆရာရဲ့သွား​တွေ၊
​နောက်​ဆုံးဆယ်​လမြတ်​ဗုဒ္ဓ၊ ထူးချွန်​ထင်​ရှားပုဂ္ဂိုလ်​များ၊ စံကားပွင့်​က​လေး​တွေ၊ ပြည်​သူလုထု အတွက်​ကဗျာ ငါ့ကဗျာကိုဖတ်​ပါ၊​ မော​နွေရှင်းတမ်း၊ နှင်းမြူရိပ်​ကိုမြင်​လျှင်​၊​ ကျောင်းသား​တွေနိုင်​တယ်​၊ စက္ကူပန်းပွင့်​မပွင့်​ဖွင့်​ကြည့်​ဖို့ပို့​ပေးလိုက်​တဲ့လိုင်းများ၊​ ကြောင်​တစ်​​ကောင်​ရဲ့ဒိုင်ယာလက်​တစ်​
အနုပညာဟာမုသားတစခုနဲ့အစပြုတယ်​၊ စံ​တော်​ချိန်​ဘ​မောင်​၊ ကဗျာအလုပ်​ရုံက​လေး၊ မူလဆုံမှတ်​
ကြယ်​မှုန်​​တွေနဲ့လင်း၊​ ဆေးရူတဲ့​မောင်​၊​ ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​ကစားနည်း၊ ကဗျာဘဝရှာပုံ​တော်​၊ကြာပန်းနှင့်​နီ​သောဇီဝ​ဗေဒ၊ မထင်​​ရှော့ခ်​၊ နံရံကပ်​စက္ကူ​အောက်​က ထူထဲ​သောသိပ်​သည်းဆအလွှာ၊ ညဟာ ညအတိုင်းညပါပဲ။ စာရွက်​သံများတဖျပ်​ဖျပ်​၊ ည​တွေထဲကအတိုင်း နံ​ဘေးကအသက်​ရူသံများ၊ အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်​ပွဲ၊ ပုဒ်​ထီးချပြီးငါငြိမ်​​နေလိုက်​တယ်​
​ချွေးစက်​​တွေကို​မေ့ခဲ့တယ်​။ မ​ပျော်​ရွှင်​မှုဆီက​နေ ကျွတ်​ထွက်​လာခဲ့တယ်​။
ကိစ္စ၊​ အ​ကြောင်းအရာ၊အဖြစ်​အပျက်​၊ အ​ခြေအ​နေ၊
ဘူး။ မှန်​/မှား။ ငြိမ်းချမ်းစွာကွဲလွဲနိုင်​ဖို့ စားပွဲခုံ​တွေကို